सौन्दर्य प्रतियोगिता - बिकिनीमा ढल्कँदो जवानी!
by Glamour NepalAugust 12, 2016
धेरै सुन्दरी प्रतियोगिताहरुमा भुतुक्कै पार्ने सुन्दरता भएका वैशालु किशोरी तथा युवतीहरुले आफ्नो सुडौल जिउडालको प्रदर्शन गर्दछन्। तर चीनमा हालै भएको एक सुन्दरी प्रतियोगिता निकै फरक थियो।
त्यहाँ वैशालु किशेारी तथा युवतीहरु हृोइन उमेर ढल्केका प्रौढ तथा वृद्धाहरुले बिकिनीमा आफ्नो ढल्कँदो वैँश देखाए। उक्त सौन्दर्य प्रतियोगितामा ५ सय जना महिलाहरुले भाग लिए र यसरी भाग लिनेमध्ये कतिपय ८० वर्ष उमेर सम्मका पनि थिए।
चीनको तियान्जिनमा यस्तो सुन्दरी प्रतियोगिता भएको हो। प्रतियोगितामा पाका महिलाहरु बिकिनीसँगै अन्य विभिन्न पहिरनमा पनि सजिएका थिए।
चिनिया सरकारी संचार माध्यमका अनुसार बुढ्यौलीका विषयमा मानिसहरुमा सकारात्मक धारणाको विकाश होस् भन्नका लागि यो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। स्थानीय एक कल्याणकारी संस्थाले लगातार दोश्रो वर्ष यो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो।
अहिलेसम्म सुल्झाउन नसकिएका ८ रहस्यहरु
एकै पुरुषका २७ पत्नी, १ सय ४५ सन्तान!
बिकिनीमा रमाईरहेकी महिला प्रहरीले जव चोर समातिन…